လ၀န်းဂမုန်းစိုက်လျှင် ရရှိနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လ၀န်းဂမုန်းစိုက်လျှင် ရရှိနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူး
လ၀န်းဂမုန်းစိုက်လျှင် ရရှိနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူး
Posted by manawphyulay on Aug 20, 2011 in Creative Writing, Photography | 17 comments
ဂမုန်းပင် စိုက်ပျိုးနည်း သူခိုးရန်က ကင်းဝေးချင်ရင်
မနောရဲ့ခြံထဲမှာ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဂမုန်းပင်တွေအများကြီးထဲက လ၀န်းဂမုန်းအကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
လ၀န်းဂမုန်းသည် ထင်ရှားသော လာဘ်ခေါ်ဂမုန်းဆိုပြီး လူသိများပါတယ်။ အဖိုအမ နှစ်မျိုးရှိပြီး တစ်အိုးစီမှာ စိုက်ပျိုးပြီး ယှဉ်တွဲထားခြင်းဖြင့် သောကပူပန်မှု ကင်းဝေးသည့် လာဘ်သပကာများ ရရှိစေပါတယ်။ ဒီလို အဖိုအမ နှစ်ပင်ယှဉ်စိုက်ထားပါတယ်။
အပင်ပုံစံကတော့ အမပင်က အရွက်ဝန်းဝိုင်းပြီး ဥမှာ ကြက်သွန်နီဥပုံ၊ အရောင်မှာ ဖြူဖွေးပါတယ်။ အဖိုပင်ကျတော့ အရွက်လျား၊ အဖျားချွန်၊ အရင်းသွယ်ပြီး အလယ်ဝန်းပါတယ်။ အပင်ရင်းက နီကြန်ကြန်ရှိပြီး ဥကတော့ အမပင်နှင့် မခြားနားပါဘူး။ အရွက်ကြောတွေက ထင်ရှားထူထဲတဲ့ ရွက်ပြားတွေရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုအပင်တွေကို စိုက်မယ်ဆိုရင် စိုက်ပျိုးပုံကတော့ မိမိတို့နှင့် သင့်လျော်ရာ နေ့၊ ရက်၊ အချိန်နှင့် ကျောက်မျက်များကို ရွေးချယ်ပြီး လ၀န်းအဖိုပင်ကို နံနက်ပိုင်း၊ အမပင်ကိုတော့ မွန်းလွဲပိုင်းမှာ စီရင်စိုက်ပျိုးရပါတယ်။ လာဘ်သပ်ပကာ ဓန စည်းစိမ်များအတွက် စီရင်ချင်ရင်တော့ အောက်ပါဂါထာမန္တန်ဖြင့် နံ့သာ (၅) ပါးရည်အား (၁၀၈) အုပ်တိတိ ရွက်ဆိုလောင်းပေးရပါမယ်။
အာဂစ္ဆဟီတိ ၀တ္တဗ္ဗော ဧသာ ဥတ္တိ
လာဘ်လာဘများ ဒီရေအလား တိုးပွားလာစေပါမယ်။ လှေကားအတက်အဆင်းမြင့်ရာမှာထားပြီးဆောင်ရွက်ရင် ပိုပြီး ကောင်းပါတယ်။
မနောတို့ကတော့ ခြံထဲမှာပဲ စိုက်ပျိုးထားပါတယ်။ တကယ်လို့ ဘေးဆီးရန်က အရံအတားပြုလိုရင်လည်း ရပါတယ်။ အောက်ပါဂါထာဖြင့် နံ့သာ (၅) ပါးရည်အား (၁၀၈) အုပ် စုတ်ကာ လောင်းပေးပါ။
ဂစ္ဆ အမုမှိ သြကာသေ တိဌာဟိ ဧသာ ဥတ္တိ
သူတစ်ပါးမကောင်း မကြံစည်နိုင်ပါဘူး။ အိမ်အ၀င်ဝ မြင့်တဲ့နေရာတွေမှာ စိုက်ပျိုးရင် ပိုပြီး အကျိုးရှိပါတယ်။ မနောတို့အိမ်မှာတော့ သူခိုးရန်က ကင်းဝေးတာကို လက်တွေ့မြင်တွေ့ရပါကြောင်း သိချင်သူများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါကတော့ လ၀န်းဂမုန်းအဖိုပင် ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ကျန်ရှိနေသေးသော ဂမုန်းပင်များအကြောင်းကိုလည်း မနော အလျဉ်းသင့်သလို ပြောပြပါဦးမယ်။
သူခိုးက ဖတ်ပြီးတော့ သောက်မြင်ကတ်ပုဒ်မနဲ့ နက်ဖြန် လာခိုးသွားမှ ရွာထဲသတင်းကြီးနေအုံးမယ်။
ခိုးပေါ့။ သူက ဘယ်မှာရှိမှန်းသိလို့လား…. မယုံ စိုက်ကြည့်ပေါ့ ဦးကြောင်ကြီးရယ်…
အွန်လိုင်းပေါ်မှာလဲ ဂန္ဘီရ ပညာရှင်တွေ ရှိတာပဲလား…။
အဲ့ဒီ့ ဂမုန်းပင်တွေက ရေအရမ်းကြိုက်တယ်။ ညနေဘက်ကို သူတို့ကို ရေလောင်းပေးရင် အရွက်တွေက စိမ်းပြီး အရမ်းလှတယ်။
မနောမရ တဲ့ မနောဖြူလေး ရဲ့ 
ကိုကတော့ အစီမ်းရောင်ကြိုက်တော့ အရွက်စိမ်းစီမ်းစိုစို နဲ့ဆို သဘောကျတယ် မေမေကတော့ ဟိုတုန်းက ဂမုန်းမှ ဂမုန်းပဲ စိုက်တယ်
တကယ်လာဘ်လာဘ.. ဓန စည်းစိမ်..စီးပွားတိုးချင်ရင်လုပ်ရမဲ့.. နည်းနာလေးတွေပေးချင်တယ်..။
မြန်မာပြည်ရန်ကုန်က..တိုက်ခန်းတွေ..အခန်းတွေလည်းများလာ.. လူတွေကလည်း ဂရင်း..ဂရင်းနဲ့..အစိမ်းရောင်ခေတ်ဖြစ်လာတော့က..
အပင်တွေကို.. စံနစ်တကျ..စီးပွားဖြစ်စိုက်ဖို့ပါ..။ ဂါထာတွေတော့ရွတ်မနေပါနဲ့.. ပါးစပ်ညောင်းပါတယ်..။ ကာစတန်မာ..(ဈေးဝယ်သူ)ကို..နှုတ်အားလေးပိုစိုက်ပြီးရှာပေါ့..။
ဥပမာ..မြန်မာတွေကြိုက်ကြမဲ့.. ညမှာပွင့်တဲ့. ပဒုမ္မာကြာပင်လိုမျိုးတွေစိုက်ပေါ့.။
ပြီးခဲ့တဲ့..တပါတ်ကတင်.. အသိတယောက်..အဲဒီလိုအပင်တွေစိုက်ပြီး..ebay ကနေရောင်းနေတာ.. တပင်..ရာဂဏန်းရတာတွေတောင်ရှိတယ်တဲ့..။
တကယ်လို့.. ယူအက်စ်မှာမှရှိတဲ့..မျိုးစေ့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလည်း ပြောပါ…။
.. ၀ယ်ပေးဆို..၀ယ်ပေးပါမယ်..။စီးပွားရေးလုပ်မှာဖြစ်တာမို့.. လုပ်အားခတော့ ယူမယ်နော..။
အောက်က၀က်ဘ်ဆိုက်မျိုးမှာ.. အပင်ထူးဆန်းတာတွေရှိတယ်..။ ကျန်တာတွေ..ရှာကြည့်ပေါ့..။
ဘာသာရေးဂျာနယ်.မဂ္ဂဇင်းမှာ.. ဘုန်းကြီးတပါးလောက်ချည်းကပ်ပြီး.. ဆောင်းပါးတပုဒ်လောက် ..သာသာထိုးခိုးလေးရေးခိုင်းလိုက်ဦးပေါ့..။
သဂျီးပြောတဲ့ ညမှာပွင့်တဲ့အပင်က ပဒုမ္မာကြာမဟုတ်ဘူးလေ။ ကုမုဒြာကြာလို့ခေါ်တယ်။ ၁၂ နာရီဆို ပွင့်တယ်။ အဖူးလေးတွေလည်း လှတယ်။ အဲအပင်က သဂျီးတို့ဆီမှာ မျိုးစေ့ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူး။ အိမ်မှာ စိုက်ထားပါတယ်ရှင်…….
အိမ်မှာတော့ အပင်စိုက်တာ ၀ါသနာပါလို့ အပင်အစုံစိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ စားပင်တွေဆို ကိုယ်က မစားရဘူး ရပ်ကွက်ထဲက ဟိုလူနည်းနည်း ဒီလူနည်းနည်း လာလာတောင်းလို့ပေးရတာများတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခုကြည့်နေပါတယ်ရှင်……. တော်တော်လှတယ်နော် ကြာပန်းတွေကောပဲ။ သဘောကျတာတွေ များကြီးတွေ့ရတယ်။ ၀မ်းသာလိုက်တာ…… ပုံတွေစုဖို့ကျတော့ အိမ်မှာစက်ပျက်နေတယ်….
တလောကဘဲ စိမ်းလဲ့တင်ခြံကြီးထဲက ရှားပါးအပင်တွေအကြောင်း MRTV4ကပြလို့ကြည့်လိုက်ရသေးတယ်။ တချို့အပင်တွေက အတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကိုး
လေမတိုက်ဘဲ အရွက်လေးတွေပူးလိုက်ခွါလိုက်အမြဲလှုပ်နေတဲ့အပင်ကိုလည်းတွေ့ရတယ် ..။
တခါက ပိုစ်တခုမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ ငှက်ပျောဖီး … အပင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးကနေ မြေကြီးထိ အဖီးကရှည်ပြီး
အလုံးပေါင်းမရေမတွက်နိုင်အောင်ပြွတ်သိပ်နေအောင်သီးနေတဲ့ ငှက်ပျောပင်လည်းတွေ့ရတယ် ….။
ကြာပင်တမျိုး ….. ကြာရွက်ပေါ်မှာ ပိုက်ဆံအိပ်ကြီးကြီးတခုတောင်တင်ပြလိုက်သေးဗျာ ..။
၆လလောက်နေရင် ကြာရွက်ပေါ် လူထိုင်လို့တောင်ရတယ်တဲ့ …။ နောက်ပြီးနှင်းတောင်တွေမှာပေါက်
တဲ့အပင်တွေကို ဒီခြံထဲမှာ အောင်မြင်အောင်စိုက်ပြထားတာလဲတွေ့ရသဗျ။
မြန်မာပြည်လို.. အပူ၊အနွေး၊အအေး.. သုံးမျိုးလို့ရတဲ့နိုင်ငံဟာ.. အပင်တွေကို..သုသေတနပြု..သေသေချာချာလုပ်ပြီးး ကမ္ဘာ့ဒေသကအပင်တွေ.. စိုက်..စီးပွားဖြစ်တမ္ဘာလုံး ပြန်တင်လို့ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်မိတယ်..။
ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့ ..အိမ်ထောင်စုတိုင်းလိုလို… အပင်တွေစိုက်ထားတတ်တာမို့.. အင်မတန်ကြီးတဲ့..ဈေးကွက်ကြီးပဲလေ..။
တခြားဒေသက..အပင်တွေ..မျိုးရိုးတွေကို.. တချီု့ဒေသ၊ပြည်နယ်နိုင်ငံတွေက..ဥပဒေအရပိတ်ထားကြပေမဲ့.. အင်တာနက်က.. ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနဲ့..တန်းညှိနေတာမို့.. ကြားပေါက်တွေလည်း…ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်..။
သဂျီးရေ… အိမ်မှာက ခြံဆိုတော့ သီးပင် အလှပင်တွေစိုက်ထားပါတယ်။ အဲလိုအပင်တွေကို ရောင်းချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ။ ပိန်းပန်းပွင့်တို့ သစ်ခွတို့ကတော့ တစ်ပန်းတစ်ခါ ပန်းဈေးက လာဝယ်ပါတယ်။ နောက် ဒန်းစီးလေဒီပန်းပွင့်တွေကျတော့ အပွင့်နဲ့ရေပြီး ရောင်းရပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဂမုန်းပင်တွေကတော့ တစ်ခါဖူးမှ မရောက်ဖူးပါ။ ခုဂမုန်းတွေကလည်း ပန်းတွေပွင့်ပြီး တချို့ဂမုန်းတွေက ကွင်းထိုးပုံစံတွေတောင် ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ဘယ်လိုရောင်းရလို့ရလည်းဆိုတာ အကြံဥာဏ်ပေးပါဦးနော်။ မနောကတော့ ဇူးနဲ့ကျောင်းပြီးပေမယ့် ဘော့တနီအပင်တွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်ရှင်။
ဂမုန်း ဆိုဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာ မစိုက်ကောင်းဘူးလို့လဲ ကြားဖူးတယ် … ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး
စနိုးရေ… အဲလို မဟုတ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်ရှင်။ စိုက်ကောင်းတဲ့ဂမုန်း မစိုက်ကောင်းတဲ့ဂမုန်းဆိုတာတွေတော့ ရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်။ အိမ်မှာကတော့ ဂမုန်းပင်အစုံရှိတယ်။ သဂျီးပေးတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲက ရောင်းတဲ့ ဂမုန်းပင်တွေ အကုန်ရှိတယ်သိလား…
လ၀န်းဂမုန်းကတော့ နာမည်လေးကလဲ စိုက်ချင်စရာပါ.. တချို့တွေရှိပါတယ်.. ဘီလူးဂမုန်း အဲဒါတွေကျတော့ မစိုက်ကောင်းဘူးဆိုလားပဲ .. ဒီဂမုန်းက ဆေးဖက်ကောဝင်လား
ဘာမှတော့မသိဘူး…အပင်နဲ့ ပါတ်သတ်လို့ …
….ဘုရားစာကတော့သြကာကန်တော့ကြိုးနဲ့ 